Ogaden News Agency (ONA) – Jabhadda ARDUF ee Qawmiyadda Cafarta oo war-saxaafadeed ciidan soo saaray
Jabhadda ARDUF ee Qawmiyadda Cafarta oo war-saxaafadeed ciidan soo saaray
Posted by ONA Admin	/ April 3, 2012
Sidaan la socono qawmiyadda Cafarta ayaa ka mid ah qawmiyadaha uu gumaysiga Itobiya xooga ku haysto oo dagaal gobanimadoon oo heerar kala duwan soo maray waday intay ku jireen gumaysiga. Waxaa maalmahan cusbaa dalxiiskii Jarmalka ahaa ee jabhadda ARDUF ay ka kaxaysteen dalkooda iyagoo sabab uga dhigay inay ku wiiqaan dhaqaalaha ka soo galaya gumaysiga arimaha dalxiiska oo dalka Cafarta aad loo yimaado. Arintaa ayaa ku dhamaatay in 5an ka mid dadkii dalxiiska ahaa ay ku dhintaan markay isku dayeen ciidamada Itobiya inay xoog ku soo furtaan. Ka dib waxaa ku xigtay inay Itobiya sheegatay inay weerar ku qaaday xeryo ay jabhadda ARDUF ku leedahay gudaha dalka Eritrea, taasoo ay beenisay dawladda Eritrea kuna tilmaantay daandaansi ay Itobiya ula jeedo inay caalamka uga weeciso dhibaatada dalkeeda ka dhex taagan iyo dagaalada ay jabhadaha ku hayaan ciidamdankeeda. Si kastaba ha ahaatee, jabhadda ARDUF ayaa bayaan saxaafadeed ka soo saartey arintaa oy ku tilmaameen in aanay jrin xeryo tababar oy ku leeyihiin dawlada dariska la’aha Cafarta ee Eritrea.
War-saxaafadeedkan ayay jabhadda ku sheegtay in aanay jirin xeryo ugu yaala meelaha ay timaameen Itobiya inay weerareen oo kala ah Galacbiyyi, Ramood iyo Ginxi. Waxayna sheegeen inay jabhaddu weerar si habaysan ay ku qaadeen ciidamada TPLF 17kii bishii Maarso goor habeen ah iyagoo dhex jiifa teendhooyinkooda, halkaasna ay kaga dileen 6 askari kuwa kalena ay ka dhaawaceen.
20kii bisha Maarso ayay jabhadd ARDUF ku qaaday ciidamada TPLF meesha lagu magacaabo Qado Qali halkaasoo ay kaga dileen 8 ka mid ahaa ciidankii halkaa fadhiyay iyo cadad kale oo dhaawac ah iyagoo ka furtay hub iyo saanad ciidan oo kala duwan iyo rasaas aad u badan.
Waxay war-saxaafadeedkaa ku sheegtay jabhadda ARDUF inay dagaal kadis ah ku qaadeen 22kii Maarso ciidamada TPLF iyagoo isku dayahaya inay ka gudbaan wabiga Sidiica Dara ee dagmada Teeru. Dagaalkaa oo ahaa mid culus ayaa cadawga lagaga dilay 12 askari halka uu dhaawaca intaa aad uga badanaa. Dagaalkaa oo muddo 5 saacadooda ah socday ayay jabhadda ku sheegtay inay isu soo dhiibeen 13 ka mid ahaa ciidamada TPLF oo jahawareer uu ku dhacay, oo 9 ka mid ah ay ahaayeen dhalinyaro aad u da’yar oo Cafar ah oo la soo qafaalay, tababar fiicanna aan la siinin. Dhalinayardaa ayaa sheegay siday uga xun yihiin in shacabkooda ay la dagaalamaan oo loo adeegsado, mana aanan ogayn bay yidhaahdeen in aan la dagaalamayno jabhadda UGUUGUMO/ARDUF”.
Dagaalka lagu xoreynayo dalka Cafar ee TPLF iyo ARDUF wuu socdaa, ismana taagayo ilaa dalkanaga aan ka xoreynayno ayay jabhadda ku sheegtay war-saxaafadeedka. Waxay kaloo sheegeen in ARDUF ay tahay jabhad ka soo horjeeda xukunka TPLF ee dhibaatada ku haya shacabkooda uuna yahay urur la asaasay 1987 kana dhisan gudaha gobolka Cafar. Waxay sheegeen in xubnihii ka tirsanaa jabhadda ARDUF eek u biiray TPLF/EPRDF ee lagu laaluushay guryaha iyo wasiirada aanay waxba ka badalaynin hadafkii ARDUF ee ahaa inay wadaan dagaalka inta ay xuquuqdooda soo dhacsanayaan dalkooda ka xoreynayaan Wayaanaha.
Waxay jabhadda ARDUF u sheegayaan caalamka in dagaalka lagu hayo shacabka Cafarta uu hadafkiisu yahay siday u xaqiijin lahaayeen TPLF-ta riyadooda ah (Greater Tigrea) oo ah in gobolka Cafarta lagu daro Tigrea. Sidaa darteed dagaalka ay jabhadda ARDUF ku jirto ma’aha oo kali ah inay xaqooda soo ceshadaan ee waa inay ka hortagaan baab’inta lagu hayo shacabka Cafarta si dalkooda looga dhigo dal Tigrea leeyahay.
Waxaa soo saaray bayaanka – Afar Revolutionary Democratic Unity Front (ARDUF)